सुन आईफोन एक्स चुहावट भयो र अब FCC प्रमाणित छ ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | एप्पल, मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
एक महिना को लागी सुन आईफोन एक्स को शुरूआत को बारे मा धेरै हल्लाहरु छन्। यस बितेका हप्ताहरूमा अफवाहहरूले बल प्राप्त गरिरहेका छन। अन्त्यमा, यस्तो देखिन्छ कि अफवाहहरू सही थिए। किनभने एप्पल फोनका केहि छविहरू यस रंगमा पहिल्यै चुहावट भइसकेको छ। यसका साथै, उपकरणले पहिले नै FCC प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको हुनेछ।
त्यसो भए यस्तो देखिन्छ कि सुनको रंगमा प्रख्यात आईफोन एक्स वास्तविक छ। हामीसँग केहि छविहरू छन् जुन यो पुष्टि गर्दछ। यद्यपि अहिलेसम्म केहि ठोस विवरणहरू फोनको बारेमा मात्र थाहा छ। तर हामी तपाईलाई सबै कुरा दिन्छौं जुन हामी तल जान्छौं।
यो सुन आईफोन एक्सले पहिले नै FCC प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसक्यो। यो के हो भनेर थाहा नभएकाहरूका लागि, यो प्रमाणीकरण हो जसले ग्यारेन्टी गर्दछ कि फोन संयुक्त राज्य अमेरिकामा बजार गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, जब कुनै ब्रान्डले यसको एक फोनको लागि यो प्रमाणीकरण प्राप्त गर्दछ, यो किनभने लन्च चाँडै हुनेछ। त्यसकारण धेरैले यो सोच्दछन् एप्पलको नयाँ फोनको प्रक्षेपण नजिकै छ.
थप रूपमा, उपकरण FCC प्रमाणित भएको तथ्यलाई धन्यवाद छ, हामीसँग पहिले नै छविहरू छन्। डिजाईन मूल आईफोन एक्स जस्तै छ। तर हामी देख्न सक्छौं कि पछाडिको भाग पूर्ण रूपमा सुन हो। जे होस् अगाडि कालो छ।
त्यसकारण, यस्तो लाग्छ कि यी छविहरूले सुनको आईफोन एक्सको अवस्थिति पुष्टि गर्दछ। वा कुनै श without्का बिना यो कुनै द्वारा सबै भन्दा विस्तृत विस्तृत बनावट हो। तर हामी आशावादी होऔं र विश्वास गर्छौं कि एप्पलको नयाँ फोन वास्तविक छ र यसको सुरुवात निकट छ।
यी मामिलाहरूमा सामान्य रूपमा, कपर्टिनो कम्पनीले यसको बारेमा केही भन्न चाहेन। यसैले हामी यस उपकरणको बारेमा छिट्टै थप जान्ने आशा राख्छौं। हामी जान्दैनौं कि यो नयाँ संस्करण हो, सीमित संस्करण हो वा तिनीहरूको दायरामा केवल एक र color थप गर्नुहोस्। हामी आशा गर्दछौं कि यस आईफोन एक्सको बारेमा सुनको रंगमा चाँडै नै जान्न सकिन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » सुनको आईफोन एक्स को फिल्टर चित्रहरु